Moses Kuria oo sheegay in sanadka 2022-ka uunan xil hoggaan u tartami doonin | Star FM
Home Wararka Kenya Moses Kuria oo sheegay in sanadka 2022-ka uunan xil hoggaan u tartami...
Moses Kuria oo sheegay in sanadka 2022-ka uunan xil hoggaan u tartami doonin
Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka koonfurta Gatundu ee ismaamulka Kiambu Moses Kuria ayaa sheegay inuusan wax kursi ah raadin doonin marka la gaaro sanadka 2022-ka oo ay dalka ka dhici doonto doorashada guud.
Xildhibaankan oo sidoo kale ah hoggaamiyaha xisbiga Chama cha Kazi ayaa sheegay inuu mudnaanta koowaad siinaya midaynta hoggaamiyeyaasha gobolka bartamaha dalka.
Waxaa uu Mr. Kuria tilmaamay inuu musharraxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo kala xaajoon doono heshiiska ugu wanaagsan ee gobolka ay dani ugu jirto.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay inuu la kulmi doono mas’uuliyiinta kala duwan sida wakiillada goleyaasha hoose, barasaabyada maamul goboleedyada iyo xildhibaanada baarlamaanka.
Xildhibaan Moses Kuria ayaa sheegay in gobolka bartamaha dalka oo ay ku nool yihiin codbixiyayaal badan ay qasab tahay in dhammaan doodaha lagu darro dhinacyada kala duwan sidoo kalena lagu soo dhaweeyo miiska wada hadallada kuwa mustaqbalka u taagan qabashada hoggaanka wadanka.
Waxaa uu xusay inuusan jirin hal musharrax oo lagu kalsoon yahay inuu si buuxda ugu soo bixi karo guud ahaan codadka ay dhiibanayaan bulshada gobolka bartamaha wadanka.
Hoggaamiyaha xisbiga CCK Moses Kuria, dhigiisa TSP Mwangi Kiunjuri iyo madaxa xisbiga NARC Kenya Martha Karua ayaa billaabay qorshaha midnimada xisbiyada siyaasadeed ee gobolka Mt. Kenya ka dib markii ay ku gacan sayreen inay xisbiyadooda burburiyaan oo ay ku biraan xisbiga UDA ee ku midaysan yihiin siyaasiyiinta taageersan madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto sidoo kalena sanadka soo socdo ku matali doono loolanka madaxtinimo ee dalka.
Previous articleDHAGEYSO:Mid ka mid ah musharraxiinta golaha shacabka ee Jubbaland oo lagu taageeray Dadaab
Next articleBarasaab ku xigeenka Wajeer oo la dhaarinaya